Ningbo Second hormone Factory yasekwa ngo-1988 Siye babenikelwe kwishishini lokuvelisa izilwanyana kangangeminyaka engama-30, kwaye sidibanisa izinto zokwenza imveliso, uphando kunye nophuhliso, ukwenziwa, iimviwo, intengiso, kwaye inkxaso kubathengi kunye ukuba ishishini ngomlinganiselo omkhulu. inkampani yethu yanikezelwa njenge "Zhejiang kushishino High-zobugcisa" kunye Cixi Top 20 namashishini ".
Inkampani yethu uluhlu olubanzi iimveliso yenzala, kunye neemveliso zethu iindleko-olusebenzayo. Kwakhona unalo API eziphambili iimveliso zethu 'ebhalisiweyo. Thina unalo igumbi silwanyana sikhulu engenazintsholongwane kwiphondo ukuze ukubona iimveliso isiphumo zethu iimpuku kunye neempuku. Ngoko ke, ukusebenza kunye nozinzo imveliso liqinisekisiwe. hormone zethu zokuzala kuthatha kwama-50% yesabelo kakuhle kwimarike fama kunye namafama orhwebo lonke elo lizwe. Thina umthengisi ezingundoqo Mengniu, Yili, Modern Farming, eBeijing eyinkunzi kwezolimo, COFCO, Zhongding Dairy amr umculo, Wens, Chuying Agro-wamadlelo, Chia Tai iqela, Ngobisi Bright kunye namanye amashishini amakhulu.
Inkampani yethu ubuchwepheshe elite kunye nomkhosi R & D. Ugqirha phambili professional lizwe kwisikolo sezonyango 30 R yethu & iqela D, waphumelela iimveliso ngaphezulu kwe-100, yaye ezinye iimveliso bafakwa umgca wemveliso. Chorionic Gonadotropin Yethu (HCG) 's ekrwada izinto amandla (10000iu / mg) lot ngaphezu imigangatho yaseYurophu kunye American Pharmacopoeia (4500iu / mg), kwaye esizifumanayo igama ngamazwe. Sizimisele ukuba uphuhliso lwemveliso ezintsha: D sodium chloride kunye Butylamine ezintathu prostaglandin utywala F2 alpha iziyobisi zethu amatsha abhalisiweyo lwezilwanyana, kwaye ezivenkileni. (Thina-mveliso kuphela ukuba ukuvota D chloride ukuza kuthi ga ngoku.) Inkampani yethu Menotropins babebhalisele Inaliti (elinye igama: Chaopai su).
Iimveliso inkampani Wethu zisetyenziswa kakhulu iintlanzi, iihagu, iinkomo kwidayari, iigusha, izilwanyana, njl Kuba iintlanzi, sibe GnRHa Iisalmon ephindeneyo ukuba isitofu kweentlanzi udaka. Kuba ofika tongfasu (owayesakuba igama PC600), thina ngoku abhalisiweyo, kwaye isiphumo zinambuzane efanayo PG600 Intervets '. Imveliso osetyenzisiweyo entsha ulwelo wethu yomlomo Altrenogest sele udlule ulungiselelo ngokutsha kwezolimo, yaye uya kuba ukugqiba ukubhalisa kungekudala. Nokuhlolwa Altrenogest yethu ifama enkulu, xa nokukhuthaza ulawulo ibhetshi swines ', oko ifumana ukusebenza ephawulekayo; ngaxeshanye, esebenzisa kunye PMSG kunye GnRH for swines 'esisigxina ixesha amadlozi, ukuphucula swines' amandla lokuzala. Ngokuba iinkomo idayari, sebenzisa GnRH kunye D chloride kunye idayari ngokusisigxina ixesha amadlozi, iba nomphumo omhle corpus luteum, nokuphucula iinkomo kwidayari lokukhulelwa.
Kule minyaka ingama-30 idluleyo, siyaqhubeka ukulandela iteknoloji phambili ukuze banikele iimveliso engcono kunye neenkonzo kubathengi bethu. Umnqophiso wethu sijolise ukuba eyona nto inkampani ukuba unalo umgangatho intle yentsimi yethu. Umbono wethu siya kuba silandela ukuqhubela iteknoloji eziphambili ehlabathini kanye Israyeli professional ukudala umgangatho ophezulu iinkonzo ezingcono, nabo bafumane igama kunye share emarikeni kunye ukuthembeka okulungileyo ingqibelelo kwakunye nomgangatho izinzile.